Korontana Etihad Airways: mailo hatrany ny Boeing, Airbus ary Air Seychelles
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Korontana Etihad Airways: mailo hatrany ny Boeing, Airbus ary Air Seychelles
Etihad Airways dia mandinika fiaramanidina an'arivony tapitrisa dolara nasaina avy tany Airbus sy Boeing
Mpiasa an'arivony no nandao ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka UAE monina ao Abu Dhabi renivohitra- hatramin'ny nanombohany nanamboatra ny orinasany tamin'ny taona 2016.
Ny famerenana ny rafi-pitantanana Etihad Airways dia andrasana hitarika fihenam-bidy sasany amin'ny fitantanana antitra sy antonony.
Tamin'ny resadresaka nifanaovan'ny CEO CEO Tony Douglas dia nilaza tamin'i Reuters Ethiad fa nanangana indray ny zotram-piaramanidina ho fizarana orinasa fito izay nitory mivantana tamin'i Douglas.
Ny talen'ny vondrona Etihad Aviation, Andriamatoa Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, dia nanendry an'i Tony Douglas ho Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona ny volana Janoary.
Amin'ny lafiny iray dia nitatitra ny Gulf Business News fa nanao fanambarana fa ny raharaham-barotra isan-karazany Etihad dia hizara ho fizarana fito: - ny asa, ny varotra, ny fikojakojana, ny fanamboarana ary ny fanamboarana, ny loharanon-karena olombelona, ​​ny serivisy fanampiana ary ny fanovana.
Etihad, izay mifaninana amin'i Emirates sy Qatar Airways, dia nilaza ihany koa fa nanendry an'i Mohammad al-Bulooki ho lehiben'ny mpiasan'ny birao ary i Robin Kamark ho lehiben'ny biraom-barotra.
Niahiahy manokana i Alain St. Ange, minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina taloha ho an'i Seychelles. Izy rahateo no tompon'andraikitra tamin'ny nanombohan'ny Etihad naka ny Air Seychelles teo ambanin'ny elany. Androany St.Ange nilaza hoe:
“Betsaka ny fanontaniana miparitaka manodidina ny Air Seychelles, izay an'i Etihad Holding no manana ny ampahany hatramin'ny taona 2017, raha nitantara ny ahiahy momba ny famindrana ny ampahan'ny kaompaniam-pitaterana anay mankany amin'ny Etihad Holding Company ny Tatitra momba ny fizahan-tany Saint Ange. Androany, famerenana amin'ny laoniny lehibe no atao ao Abu Dhabi ary ny Air Seychelles dia very ny anton'ny fisiany ho toy ny politikam-piantohana ho an'ny indostrian'ny fizahantany Seychelles. Mampiahiahy ny ahiahy amin'ny saran-dàlana azo ampiharina avy any Maorisy mankany India amin'ny alàlan'ny Seychelles, ary koa avy any Afrika atsimo ka hatrany India amin'ny alàlan'ny Seychelles. Tsy mamporisika ny dia fitsangatsanganana any Seychelles ireo saran-dalana azo ampiharina ireo, fa mankalaza an'i India ho toerana fialantsasatra. ”
Niainga i Tsaradia: Ny zotram-piaramanidina vaovao eto Madagasikara
Resy tany Kazan Rosiana i Brezila ary lasa: fotoana mampalahelo indrindra!